‘कर्णाली आऊ डाक्टर बनेर जाऊ’ « Sudoor Aaja
सुदूर आज ६ श्रावण २०७८, बुधबार २१:२६
आकाश रोएझैं देखिन्थ्यो, ठूलै शोकमा ! लाग्थ्यो, जुम्लाले भारतको चेरापुन्जीलाई माथ गर्न खोज्दैछ ! पोस्टमोर्टम विना दाहसंस्कार गर्न पाइएको थिएन । शव सडेर दुर्गन्धित भएको थियो । यो कारुणिक दृश्यले उपस्थित सबको मन रुवायो ।
बिरामीहरू जिल्ला अस्पताल यस अर्थमा पुग्थे कि जसले सिफारिश गरेमा हवाईजहाजको टिकट पाउन सहज हुन्थ्यो । नयाँ जीवन पाइने आशले होइन । एमबीबीएस डाक्टर समेत जिल्लामा बस्दैनथे । विशेषज्ञ डाक्टर त कल्पनामा मात्र !
सोचें, यसको विकल्प किन नखोज्ने ? त्यसपछि सम्भावनाको गर्भमा हुर्कन थाल्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानरूपी अण्डा ! भरोसा गरेका केही राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले सम्भव हुँदैन भन्ने राय दिए । म अलिकति हच्किएँ । तर, विचलित भइनँ । मेरो सङ्कल्पलाई झिनामसिना बाधाले रोक्न सक्दैनथे । लक्ष्यमा पुग्न कहाँ पो सजिलो हुन्छ र !
मेरै नेतृत्वमा प्रतिष्ठान स्थापना पहल समिति बन्यो । सम्बद्ध पक्षको अनुमति तथा परामर्श पश्चात अन्ततः व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरें ! एक जना डाक्टर नबस्ने कर्णालीमा विश्वविद्यालयस्तरको संरचनाको प्रयत्न हुनुलाई थुप्रैले ठट्टा ठाने । प्रतिष्ठान स्थापना भएमा आत्मदाह गरिदिने घोषणा गरियो । सस्तो लोकपि्रयताको संज्ञा दिइयो । बकबास भनेर खिल्ली उडाइयो । तर उत्साहको दियोमा पानी खन्याउने मात्र नभई तेल थप्ने पनि भेटिए ।
असीमित खुशी भएँ । त्यस रात मस्त निदाएँ । सोच्न थालें- उडान त भरियो ! अवतरण कसरी हुन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र बोकेर शिक्षा मन्त्रालयतर्फ उत्साहका पाइला लम्काएँ । बाटो टुङ्गएिको हेक्का नै भएन । पत्र दौड कानून, अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयमा निरन्तर चलिरहृयो । एकपटक होइन, पटक-पटक । कागजका खुट्टा हुँदैनन् भनिन्थ्यो, भोगाइले सत्य सावित गर्‍यो ।
मन्त्रीहरूको फेरबदलसँगै चिन्ताको ग्राफ बढ्थ्यो । संविधानसभाको आयु घाँटीसम्म आइसकेको थियो । संविधानसभाको आयु हरेक तीन महीनाको किस्तामा थपिन्थ्यो । मिनेट-मिनेटलाई सदुपयोग गर्नै पथ्र्यो । पारित नहुँदा विधेयकको हविगत लुँडो खेले जस्तो हुन्थ्यो ।
राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरले तोकेको १०-५ को कार्यालय समय काफी अपुग लाग्न थाल्यो । शनिवारले विधेयकलाई स्थिर बनाइदिन्थ्यो । घडीको सुईले फन्को माथ्र्यो तर विधेयक भने जहाँको त्यहीं । शनिवार पनि त्रासदीका रूपमा आउन थाल्यो । लाग्थ्यो, शनिवार नआइदिए हुन्थ्यो !
तसर्थ, छोटो बाटोबाट विधेयक पारित गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्ने विकल्पमा जान जरूरी थियो । सांसदहरूलाई अनुरोध गरेर संशोधन प्रस्तावलाई रोक्न संशोधन अवधिको (७२ घण्टा) कार्यालय समय विधेयक शाखा कुरेरै बसें । सफल पनि भइयो ।
अन्ततः विधेयक छोटो बाटोबाट संसदमा पेश भयो । मुटुको धड्कन बेजोडले बढ्यो । परीक्षाको नतिजा कुरेझैंको मनोदशामा थिएँ । आफैंलाई प्रश्न गरें, प्रयत्न कतै बालुवाको महल हुने त होइन ? संसदबाट विधेयक पारित भयो । पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाका लागि व्यग्र प्रतीक्षित महान् ऐतिहासिक दिन थियो त्यो ।
उपकुलपति लगायत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भयो । देशकै विश्वविद्यालयस्तरका चार ठुला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान मध्ये एक बन्यो कर्णाली प्रतिष्ठान ! कल्पें, कुनै दिन ‘कर्णाली जाऊ डाक्टर बनेर आऊ, कर्णाली जाऊ स्वस्थ बनेर आऊ’ को मान्यता स्थापित हुनेछ ।
‘गरे हुन्छ’ भन्ने उदाहरण बनिदियो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कास) !
स्थापनको झण्डै दशकपश्चात प्रतिष्ठान कर्णालीको भरोसा र मुलुकको आशा बनेको छ । यो संस्था परम्परागत विकास मोडलको विकल्प समेत बन्न सफल भएको छ । कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा नेपालका सीमित अब्बल संस्थाको पंक्तिमा आफूलाई उभ्यायो । शहरमा बिरामी पठाउने कर्णालीले डाक्टर पठायो । भन्यो, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी सुसज्जित छौं ! जीवन रक्षा गर्न सक्छौं ! प्रतिष्ठानले यो सन्देश शहरलाई पनि दियो ।
सेतो हिउँमा सेतै अप्रोनधारी डाक्टरहरू उत्पादन गर्ने सपना सार्थक हुँदैछ ! आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठानलाई अब्बल बनाउन सम्बद्ध पक्षको योगदान रहिरहेमा सगौरव भन्न सकिनेछ, ‘कर्णाली आऊ डाक्टर बनेर जाऊ, कर्णाली आऊ स्वस्थ बनेर जाऊ !’ – अनलाइनखबर